India: 'Kisan Rail' chirongwa chekubatsira varimi: PM Narendra Modi | India Nhau - Tamban RELAY
Mufananidzo wefaira waMP Narendra Modi
New DelHI: Mutungamiriri weNarendra Modi nemusi weSvondo akataura kuti chirongwa che "Kisan Rail" chinobatsira varimi venyika yese sezvo vachizokwanisa kutengesa zvirimwa zvavo mumadhorobha.
Mutungamiriri akataura kuti India yekutanga Kisan njanji yatanga pakati paMaharashtra neBihar.
"Mazuva maviri apfuura, chirongwa chikuru chakatangwa chinosanganisira varimi vadiki vemunyika, izvo zvichabatsira zvikuru varimi venyika yose munguva inotevera. Njanji yekutanga yenyika yeKisan yatanga pakati paMaharashtra neBihar, "Prime Minister said.
“Varimi vadiki vakabatana neMumbai nePune zvakananga. Chitima ichi zvakare chinozobatsira varimi veUttar Pradesh neMadhya Pradesh apo chitima chichafamba nematanho aya. Icho chechitima chinofefeterwa nemhepo uye chakafanana nekutonhora kuchichengeterwa njanji. Vanhu vanogara mumaguta vachawana miriwo nyowani. Hari hwezvitima tichienzanisa nemarori zvakare dzakaderera, ”akadaro.
NeChishanu, Gurukota re Railway Piyush Goyal uye Gurukota rinowona nezvekurima.
Chitima chinomhanya vhiki nevhiki.
Mutungamiriri wenyika akati kana varimi vadiki vachisvika kumaguta makuru emunyika, ivo vachakurudzirwa kukurima miriwo minyoro, mombe dzemhuka nekudyara.
“Izvi zvichavhura nzira yekuwana mari yakawandisa kubva papasi rakashoma uye zvichapa mikana mitsva yebasa uye yekuzvishandira. Matanho aya achazivisa pamwe nyowani yebazi rezvekurima muIndia, ”akadaro.
Prime Minister akataura kuti shanduko dzakawanda dziri kuitirwa kuramba dzichirangarira kufarira kwevarimi vadiki.
“Murimi mudiki ave kutarisana nedambudziko rakanyanya. Kwemakore matanhatu - manomwe adarika, Hurumende iri kuedza kuvabatsira, ”akadaro.
Prime Minister akataurazve kamupendero kake "do gaz ki doori- mask hai jaroori" apo vachikumbira varimi kuti vapfeke kumeso kwemasketi uye voramba vachichengetedza nzanga yepakati peCovid-19 denda.